भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई करोड नाघ्यो : नेपालमाला
May 4, 2021 --
नयाँ दिल्ली : भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको कुल सङ्ख्या दुई करोडभन्दा माथि पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन लाख ५७ हजार भन्दा धेरै सङ्क्रमित थपिएसँगै कुल सङ्ख्या दुई करोड नाघेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबार जनाएको छ ।
कांग्रेसले देउवाको विकल्प खोज्न लागेकै हो ? विमलेन्द्र, शशांक र प्रकाशमानको ‘लञ्च मिटिङ’को औचित्य के ?
काठमाडौंभन्दा बागलुङमा कोरोना संक्रमण बढी
पछिल्लो २४ घण्टामा ३१३० जनाले जिते कोरोना, २२९७ संक्रमित थपिए
आज वर्षको सबैभन्दा लामो दिन